प्रधानमन्त्री निवासमा ५ घण्टा के–के भयो ? « Pahilo News
प्रधानमन्त्री निवासमा ५ घण्टा के–के भयो ?
प्रकाशित मिति :3May, 2018 9:20 pm
काठमाडौं, २० बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच ५ घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको छ । प्रचण्डले माक्र्स जयन्ती–२२ वैशाखमै पार्टी एकीकरण घोषणासभाको मिति टुंगो लाग्ने बताएकै भोलिपल्ट दुई नेताबीच त्यति लामो छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग वार्ताका लागि प्रचण्ड दुई पटक बालुवाटार पुगेका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच सवा १० बजेबाट करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो । त्यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कोटेश्वरस्थित निवासमा संक्षिप्त छलफल गरेर प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए ।
दोस्रो चरणमा पुन ः वार्ताका लागि ३ बले बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड करिब पौने सात बजेतिर मात्र बाहिरिएका थिए । तर, आजै निर्णायक निष्कर्ष निकालने भनिएको वार्ताको प्रगति के भयो भन्ने विषयमा दुवै पक्षका नेताहरुले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । ‘उहाँहरुबीच दुई पटक गरेर लामै छलफल भयो तर एकैचोटी परिणाम निकाल्ने वार्ता प्रक्रिया जारी रहेकाले दुवैजनाले हामी कसैलाई केही पनि बताउनुभएको छैन ।’ भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने ।
अझै निष्कर्षका लागि कुर्नपर्ने भोः प्रधानमन्त्री
चुनाव चिन्ह् सूर्य प्रयोग गर्ने, विधानको प्रस्तावनामा माओवादीले जनयुद्ध गरेको थियो शब्द उल्लेख गर्ने यसअघि नै सहमति भइसके पनि दुई नेताबीचको पछिल्लो छलफल एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीसहित दशओटै तहको संरचनामा दुवै पार्टीको संख्यात्मक हिस्सेदारीमा केन्द्रीत छ । प्रचण्डले आफूलाई पार्टी नेताहरुको व्यबस्थापनको ‘प्रेसर’ रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सेदारी दिनसमेत लचक बनिसकेका छन् । तर, आजको छलफलमा भने प्रचण्डले त्यसभन्दा अघि बढेर एकीकृत पार्टीमा महाधिवेशनपछिको अध्यक्षको सुनिश्चितता खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीले निकटस्थहरुलाई प्रष्ट संकेत गरेका छन् । ‘अहिले नै भन्ने विषयबस्तु केही पनि रहेन, छलफलबाट निष्कर्षका लागि अझै कुर्नुपर्ने भो’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले पहिलोन्यूजसँग भने ।